Home Somali News EU: Qorshaha EU ee la dagaalanka Tahriibta oo Dhawaan la filayo inuu...
Waxaa Isniintii shalay kulan ay yeesheen Wasiirada Difaaca ee dalalka Midowga Yurub lagu go’aamiyey dhismaha ciidamo la dagaalama kooxaha ka ganacsada Tahriibta.
Qorshahan ayaa lagu sheegay in ciidamadan ay ka hortagi doonaan doonyaha ay adeegsadaan kooxaha ka ganacsada Tahriibta, isla markaana burburin doonaan.
Ciidamadan ayaa xarun looga dhigi doonaa magaalada Rome ee caasimada Talyaaniga.
Midowga Yurub ayaa sheegay in ciidamada hawlahooda bilaabi doonaan bisha soo socota ee June, xili dalalka EU-da ka cabsi qabaan dad badan oo Tahriib ah inay xeebahooda soo gaaraan xiliga Xagaaga.
Balse ciidamadan ayaan weli sharci u heysan inay wax hawlgalo ah ka sameeyaan bada iyo beriga dalka Liibiya, iyadoo marka hore laga rabo Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay inuu hawlgalkan ansixiyo.
Murranka Tahriibta iyo dalalka EU-da
Dalalka Midowga Yurub ayaa hada si weyn uga doodaya sidii laga yeeli lahaa kumanaanka kun ee tahriibayaasha soo gaaray wadamadaasi.
Sanadkan oo kaliya ayey Yurub soo gaareen in ka badan 51 kun oo Tahriibayaal ah, iyadoo 30 kun oo kamid ah soo galeen dalka Talyaaniga.
Arrintan ayaa keentay culeys weyn oo soo wajahan dalalka Talyaaniga, Malta iyo Giriiga oo ay qaxootiga soo galeen.
Waxayna dalalkan codsadeen in wadamada kale ee Midowga Yurub ay la wareegaan qaxootiga qaar inta codsigooda qaxootinimo la eegayo.
Illaa iyo hada dalalka Sweden iyo Germany ayaa ogolaaday inay qaataan qaar kamid ah qaxootiga, balse dalalka kale ee Yurub ayaa qaarkood kasoo horjeeda inay qaabilaan wax qaxooti dheeraad ah.
UK ayaa diiday inay wax qaxooti ah dhankeeda la wareegto, halka Faransiiska uu ku andacooday inuu horey u qaatay qaxooti badan oo ka yimid Siiriya & Ciraaq sanadkii 2012, sidoo kale Spain ayaa sheegtay in dalkeeda uu dhaqaale xumo ka jiro aysana wax dhaqaale ah u heyn qaxootiga.